I-Renovated Apartment x2p kwi-2 km ukusuka eLakeTrasimeno - I-Airbnb
I-Renovated Apartment x2p kwi-2 km ukusuka eLakeTrasimeno
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguRosa
Wamkelekile eCasale Magione, ifama yefama eqhelekileyo yalungiswa ngokupheleleyo ngoMeyi 2017. Sibhaptizwe emaphandleni ase-Umbrian ngaphandle kwelali ephakathi yaseMagione, imizuzu emi-5 ukusuka eLake Trasimeno naseCorciano, imizuzu eyi-12 ukusuka ePerugia, imizuzu engama-25 ukusuka e-Assisi, ezimbalwa. amashumi emizuzu ukusuka eSiena, eCortona naseSpoleto. Ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo ukuhlala okunokunika ukuphumla, inkcubeko, imidlalo kunye nokutya okulungileyo.
Indlu yesitudiyo (yabantu aba-2) ihlaziywe ngokupheleleyo ngesitayile sendlu yasefama yamatye. Kukho ikhitshi kunye netafile, ibhedi ephindwe kabini enewodrophu kunye negumbi lokuhlambela elinomatshini wokuhlamba.
Indawo yokuhlala ine-terrace ezimeleyo / igadi enetafile kunye nezitulo ukonwabela indawo enkulu yangaphandle.
4.94 · Izimvo eziyi-95
Indawo eqhelekileyo yase-Italiya kumaphandle ase-Umbrian nje ngeemitha ezingama-500 ukusuka kwilali yakudala yaseMagione, iikhilomitha ezi-2 ukusuka eLake Trasimeno kunye neekhilomitha ezili-10 ukusuka ePerugia.
Indlu yam ikwimitha engama-30 kuphela ukusuka kwindawo yeendwendwe. Ndiza kufumaneka xa kufuneka.